युवाको बल र बुढाको बुद्धिबाट नयाँ नेतृत्व छान्नुपर्छ
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस जुम्ला​का सभापति दीपबहादुर शाही​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्यौल नै अन्याेलमा छ । आज १० गते भइसक्यो । यही १८ गते वडा अधिवेशन हुने–नहुने भन्नेमै शंका भइसक्यो । पार्टीको विधानलाई संशोधन गर्ने, परिमार्जित गर्ने, विधान बनाउने महासमितिको बैठकले हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले आफैं विधान संशोधन गरिरहेको छ, परिमार्जन गरिरहेको छ । यो केका लागि के खेल हुँदैछ भन्नेमा मुलुकभरका कांग्रेसीजनमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
यो बेलामा हामी सचेत नेतृत्व छान्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छौं । नेपाली कांग्रेस पार्टीको लामो इतिहास छ । बिपीको विचारलाई अँगाल्न सक्ने, गणेशमानको साहसलाई कायम राख्न सक्ने, मुलकभरका कांग्रेसका कार्यकर्ताको शिर ठाडो बनाउन सक्ने नेतृत्वको खोजीमा हामी छौं । मुलुकभरिमा अहिले कम्युनिस्टहरु टुट्ने र फुट्ने शैलीबाट अघि बडिरहेको अवस्थामा अब कांग्रेसले कस्तो प्रकारको नेतृत्व दिने भन्ने महत्वपूर्ण विषय छ ।
कर्णाली प्रदेश भनेको दूरदराजको स्थान हो । जुम्लाको कथाव्यथा छुट्टै छ । हामीले अधिवेशन गर्दैगर्दा कसरी अघि बढ्ने, सहमति–असहमति हुँँदाहुँदै कसरी सबै कुरा मिलाएर लाने भन्ने सोच्नु आवश्यक छ । आगामी चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै अबको अधिवेशन अलिकति फराकिलो भावना राख्दै गर्न सक्नुपर्छ ।
युवाहरु महाधिवेशनमा केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि गाउँ तहसम्म आउनुपर्छ । तर, सबै युवा आउनुपर्छ भन्ने होइन । कुनै पनि वस्तुलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यहाँ सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बल र बुद्धि दुवैको समायोजन गर्यो भनेमात्र समाज अघि बढ्न सक्छ । युवाहरुसँग बल छ र बुढाहरुसँग बुद्धि हुन्छ, यी दुवै कुराको भेटघाट गराएर मात्र महाधिवेशनमा जानुपर्छ ।
अहिलेको केन्द्रीय महाधिवेशनमा युवाहरु पनि आउनुपर्छ र अग्रजहरुको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । युवाहरुको बल पनि चाहिन्छ । यी दुवै समायोजन गरेर महाधिवेशन हुनुपर्छ ।
कांग्रेस पार्टीभित्र परिवारवाद छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनुपर्दैन । यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । जो शीर्ष नेताहरु भए उनीहरुका श्रीमतीसमेत नेतृत्वमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । हामीले त देशभरका सभापति मिलेर मकवानपुरको भेलामा समावेशी, समानुपातिकको विषय उठाएका थियौं । एक पद, एक व्यक्ति हुुनपर्छ भनेर हामीले त्यो भेलामा पनि भनेका थियौं । बहुमत हैन, अल्पमत होइन, तर पूर्ण समावेशीको कुरा ल्यायौं । तर, त्यो पास हुन दिइएन । समानुपातिक, समावेशी भनेर कसैका श्रीमती, कसैका छोरा, कसैका भान्जा, कसैका ज्वाइँले ठाउँ पाइरहेका छन् ।
यो समस्या नेपाली कांग्रेसमा मात्र नभएर कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि उत्तिकै छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका पनि छोरी, बुहारी भाइ, ज्वाइँ सबैले ठाउँ पाएका छन् । यो नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीमा देखिएको समस्या हो । तर, यस्तो समस्यामा पार्टी फस्न हुँदैन ।
नातावाद वा कृपावादभित्र नेतृत्व फस्न हुँदैन भन्ने मुलुकभरिका सबै लोकतन्त्रवादीहरुको सामूहिक धारणा छ । नेता–कार्यकर्ताहरुले लामो इतिहास बोकेर त्याग गरेका छन्, कोही युवा छन्, कोही पिछडिएका मान्छे छन्, यी सबैलाई हेरेर परिवारवाद लागू हुन हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।
यतिबेला कांग्रेस थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मुलुकमा कोभिड, बाढी–पहिरोलगायतका समस्या आँखैअगाडि देखिएका छन् । त्यस्तै समस्या नेपाली कांग्रेसमा पनि छ । जुन अवस्थामा बाढी–पहिरो र कोभिड छ त्यही अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी छ । तर पनि सबै बाधा–व्यवधान पन्छाएर १४ औं महाधिवेशन हुनैपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय तहका नेताहरुले साँघुरो घेराबाट माथि उठ्नुपर्छ । अब महाधिवेशन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय सोच्नुपर्ने हुन्छ । आजको युगमा त ७५ नै जिल्लाबाट अनलाइन सिस्टमबाट भोट हालेर काठमाडौं पठाउन सकिन्छ । त्यसकारण बाढी–पहिरो र कोभिडको महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेतृत्वले विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्छ ।
हिजो पनि जिल्ला सभापतिहरु काठमाडौंमा धर्नामा बसेको सुनियो । मुलुकभरिबाट आएका क्रियाशीलको नामावली पनि सार्वजनिक हुनुपर्यो । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगरी सुखै छैन ।
प्रकाशित मिति : भदौ १०, २०७८ बिहीबार १९:४५:३४,